JABUUTI Oo Guddi Xaqiiqo Raadin Ah U Dirtey Xadka Soomaaliya Iyo Kenya – somalilandtoday.com
JABUUTI Oo Guddi Xaqiiqo Raadin Ah U Dirtey Xadka Soomaaliya Iyo Kenya
(SLT-Jabuuti)-Dowladda Jabuuti oo loo xil saaray inay hakiso khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa wafti xaqiiqo raadin ah u dirtay xadka labada dal ee magaalooyinka Beledxaawo iyo Mandheera.
Wasiirka arrimaha Dibadda ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa warbaahinta u sheegay in wafti ka socda Jabuuti – oo isugu jira diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan loo diray xadka kala qeybiya Beledxaawo iyo Mandheera, si ay xaaladda ugu soo kuur galaan.
“Waxaan aaminsan nahay in Jabuuti ay door ka ciyaarto nabadda iyo xasiloonida gobolka. Shirkii ugu dambeeyay IGAD ee ka qabsoomay Jabuuti ayaa arrintaas lagu soo hadal qaaday waana la isku waafaqay. Waxaan sii wadi doonnaa inaan dajinno xiisadda ka taagan gobolka,” ayuu yidhi wasiirka.
Tallaabadaas waxay ku timid shirkii madaxda urur Goboleedka IGAD ee Isniinta toddobaadkii hore lagu soo gabo gabeeyay magaalada Jabuuti, kaasoo ay isku arkeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya, Uhuru Kenyatta.